Knowledge Archives * Manaw Maya
Zawgyi သူများထံမှ ယူထားတဲ့ ငွေ ပြန်ဆပ်ချင်သူတွေ အတွက်ပါ တချို့ မပြေလည်လို့. သူများဆီက ကြွေးယူ မပြေလည်တော့ပြန်မဆပ်နိူင် ရှာကြဘူး။ ဒီလို ပြန်ဆပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာက် ရှိတာကိုက. အင်မတန် လေးစားစရာ ကောင်းတယ် သူများဆီက. ငွေယူပြီ ပြန်ဆပိချင်တဲ့ စိတ်ဓာက် ရှိသူတွေလည် ရှိတယ် ။ သူတို့ခမျာ မပြေလည်လွန်းလို့သာ ငြိမ်နေရှာ ကြတာ ငွေ […]
Zawgyi အချိန်တော်တော်များများမှာ ကလေးတွေဟာ ကန်ကျောက်တာနဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေကို ပြုမှုချိန်မှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် သူတို့တွေ ဘာတွေ ခံစားနေသလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်ကြလို့ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းကို ရှာမတွေ့လို့ပါပဲ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အင်္ဂလန်က စာသင်ကျောင်းတွေဟာ နည်းလမ်းသစ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပြီး စတင်လုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ လူငယ်လူရွယ် ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ စာသင်ခန်းတွေမှာ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကို […]
Zawgyi ဂရိနဲ့ ရိုမန်အင်ယာပါတွေလက်ထက်မှာ ထုဆစ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားပုံစံရုပ်တုတွေမှာ လူ့အရွယ်အစားနဲ့ သိပ်ပြီးမလိုက်ဖက်တဲ့ လိင်အင်္ဂါသေးသေးလေးတွေကို လူတော်တော်များများ သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့က သတိထားမိရုံတင်မကပါဘူး ဘာဖြစ်လို့ ဒီအမျိုးသားရုပ်တုတွေမှာ လိင်အင်္ဂါသေးသေးလေး တပ်ထားရတာလဲ လို့ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေကို မေးကြပါတယ်။ lur Princess အမည်နဲ့ တွစ်တာအကောင့်သုံးနေတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း ” ဘာလို့ Florence’s Piazza Della […]
Zawgyi ဆရာစံဇာဏီဘို၏ နိုဝင်ဘာဘာလတစ် လစာ ၁၂ လရာသီခွင်ဖွားများအတွက် ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကိုမိတ်ဆွေများအတွက် မိဿရာသီ Aries မတ်လ(၂၁) မှ ဧပြီ(၂၀) မိသားစုအတွက် ရည်စူးဆောင်ရွက်သည်များအဆင်ပြေမည် စုပေါင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်အကျိုးပေးမည် စီးပွားတိုးတတ်မည်။ လူမျိုးကွဲ၊ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန် အခါကောင်းကျရောက်သည် စုစည်းပေါင်းစပ်၍ လုပ်ကိုင်သောကိစ္စများမှ တိုးတက်မှုရရှိမည်။ ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းထက် […]
admin | October 27, 2019 | 0
မိတ်ဆွေခုနှစ်နေ့ဖွား သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေ၎အာက်တိုဘာလ( 28 ) ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ (3)ရက်အထိ ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) တစ်ပါတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ7ဂဏန်းအကျိုးပေးမည် ခွေးကို ထန်းလျက်ဆယ်ခဲ ကျွေး၍ လိုရာဆုကိုတောင်းပါလေ […]
admin | October 26, 2019 | 0
မိတ်ဆွေခုနှစ်နေ့ဖွား သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေ၎အာက်တိုဘာလ( 27 ) ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ (2)ရက်အထိ ( ဆောင်ရန် ရှောင် သတိပြုရန်နှင့် ယတြာ ) တစ်ပါတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ တနင်္လာနေ့ အိမ်ဘုရားမှာ အုန်းထမင်း ကပ်လှူ ၍ လိုရာဆုကိုတောင်းပါလေ တနင်္လာ […]
သုံးရက်အတွင်း သိသာစွာ ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာစေမည့်နည်းလမ်း
Zawgyi နှစ်သစ်မှာ ဆေးနည်းသစ်တခုပေးပါရစေ။ သုံးရက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်နဲ့ကို သင့်အသားအရေ ထူးခြားလာစေပါတယ်…။ အထူးသဖြင့် နေလောင်ထားတဲ့ ခြေ၊လက် အသားအရေအတွက် ဒီနည်းက အသုံးဝင်လွန်းပါတယ် ပျက်ဆီးနေတဲ့ အသားအရေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးချင်တယ် ဆိုရင် အဆင့်(၂)ဆင့် ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…။ ပထမအဆင့်က ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ် scrub လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒုတိယအဆင့်က ခြေလက်တွေ ပြန်လည် […]
admin | October 19, 2019 | 0
Zawgyi ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး နှာခေါင်းမရှုံ့ပါနဲ့နော်…. တကယ်က လေလည်တယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကျန်းမာနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါတဲ့ ။ လေမလည်ရင်သာ စိုးရိမ်ရတာပါ. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတွေ စားသောက်သမျှ အာဟာရတွေကို အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းတွေအတွက် စုပ်ယူအပြီးမှာ ဂတ်စ်တွေထွက်လာပြီး ဒါဟာ သဘာဝဖြစ်စဉ်တခုမလို့လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ.. သူများရဲ့ လေလည်တဲ့အနံရရင်တော့ နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ ယပ်ခတ်တာ၊ ထွက်ပြေးတာ တခုခုလုပ်ပေ့ါလေ… (၁) […]